अल्सर कसलाई र किन लाग्छ ? कसरी गर्ने उपचार ? « Drishti News – Nepalese News Portal
अल्सर कसलाई र किन लाग्छ ? कसरी गर्ने उपचार ?
१४ चैत्र २०७७, शनिबार 10:40 am
काठमाडौं – पेटमा अल्सर भएमा पिडा नाइटोबाट सुरु भई छातीसम्म दुख्छ । समयमै उपचार नगरे यसले भयानक समस्या निम्त्याउन सक्छ । र, पेट सम्बन्धि अन्य समस्याहरु पनि उब्जिन्छन् ।
सुरुवाती चरणमा अल्सर पत्ता लगाउन केहि कठिन हुन्छ । तथापि, तल उल्लेखित लक्षण देखिएमा सचेत हुन जरुरी छ ः
त्यसबाहेक, फोहोर तथा दुषित खानेकुराबाट बच्नुका साथै साबुन(पानीले राम्ररी हात धोएर मात्र खाना खानुपर्छ ।